२१ जेठ २०७७, बुधवार | Jun 03, 2020 | 06:49:18
By synergyfm on	 April 9, 2020 अर्थ-वाणिज्य, चितवन सेरोफेरो, प्रमुख समाचार
भरतपुर महानगर–१६ ब्रहमपुरका किसान जनक पाठकले १० कठ्ठा खेतमा लगाएको काँक्रो बिक्री हुन नसकेपछि ट्रयाक्टर लगाएर नष्ट गर्दै
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण देशभरका किसानले तरकारी, फलफूल, दूध तथा कुखुरा नष्ट गर्नुपरेको छ । आत्मनिर्भर हुन लागेको डेरी उद्योगमा ८० प्रतिशतले खपत घट्दा किसान, सहकारी र उद्योगी दूध नष्ट गर्न थालेका छन । तरकारी बिक्री नभएपछि किसानले बारी जोतेर नष्ट गर्दै छन । चितवन भरतपुरका किसानहरुले लकडाउनका कारण तरकारीले बजार नपाएपछि बारीमा ट्याक्टर लगाएर नष्ट गरे ।
भरतपुर महानगरपालिका–१६, ब्रह्मपुरका झन्डै ८० भन्दा बढी किसानले खेतमा नै ट्याक्टर लगाएको स्थानीय किसान जनक पाठकले बताए । त्यस क्षेत्रका किसानहरूले मंसिर अन्तिम हप्ता काँक्रो लगाएका थिए । अहिले उत्पादन बढी आउने समय हो । तर, बिक्री नहुँदा बारीमा नै ट्याक्टर लगाएर नष्ट गरेको पाठकले बताए । उनले १ लाख लगानी गरेर १० कट्ठामा लगाएको बेच्ने वेलाको काँक्रो नष्ट गरेका हुन । सोही क्षेत्रका अर्का किसान नवराज बोलखेले पनि १ बिघामा लगाएको काँक्रो नष्ट गरेको बताए । उनले भने, ‘गाउँभरि सबैको काँक्रो छ । सित्तैमा लैजाऊ भन्दा पनि लाने मानिस भएनन् । टाढा लगेर बिक्री गर्न लकडाउनका कारण सम्भव रहेन,’ बोलखेले भने, ‘त्यहाँसम्म र्पुयाउँदा फेरि खेताला लगाउनुर्पयो ।’
ढुवानी गर्ने साधन उपलब्ध नहुँदा र विक्रि गर्ने बजार क्षेत्र नभएकाले व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको नयाँ खेती शुरु गनुपर्ने बाध्येताले ट्याक्टर लगाएको बताउछन् । दिनको एक पटक टिप्नु पर्ने काक्रो हप्तौ सम्म विक्रि नहुदा व्यवस्थापनै गर्न सकिएको भन्दै त्यसै ठाउँका रामकृष्ण अधिकारीले पनि १० कठमा लगाएको काक्रोमा ट्याक्टर लगाएका छन् । उनले भने –लगात उठाउछु भन्ने हिसाबले भरतपुरमा रहेका महानगर फलफुल तथा तरकारी बजारमा एक व्यपारीलाई भनेर काक्रो विक्रि गर्नको लागि अनुरोध पनि गरेको थिए । त्यही दिन बजारमा प्रशासनले ताला लगायो । भित्र रहेको काक्रो विग्रीए पछि सरसफाई सुल्क तिनुपर्छ भनेका छन् । पौडेल र बोलखे भने अहिले क्राक्रो खेती छोडेर मकै लगाउने तयारी गर्दै छन् । उनीहरु भन्छन् विक्रि भएन भने पनि त मकैको रोटि बनाएर खान मिल्छ । मकैनै भण्डारन गरेर राख्न मिल्छ । काक्रो भण्डारन गरेर राख्ने हाम्रो क्षमता कहाँ छ र ?
पौडेल र बोलखे भने अहिले क्राक्रो खेती छोडेर मकै लगाउने तयारी गर्दै छन् । उनीहरु भन्छन् विक्रि भएन भने पनि त मकैको रोटि बनाएर खान मिल्छ । मकैनै भण्डारन गरेर राख्न मिल्छ । काक्रो भण्डारन गरेर राख्ने हाम्रो क्षमता कहाँ छ र ?
गत वर्ष २ लाख देखि ५ लाख सम्म कांक्रो बाट नाफा कमाएका किसाहरुले यस वर्ष भने लागत पनि उठाउन सकेन्न् । भरतपुर १६ कै किसान टेक बहादुर गुरुङ्गले २ कठ्ठामा लगाएको धनियाँमा ट्याक्टर लगायर नष्ट गरे । १७ कठ्ठामा रहेको काक्रो नष्ट गर्ने तयारीमा उनी छन् । भारत बाट आएका कृषि उपजहरुले नेपाली बजार पाएको भएपनि हाम्रो उत्पादनले बजार पाएको छैन उनले भने नष्ट गनुको विकल्प पनि छैन । यस्तै त्यसै ठाउँका सुबिन न्यौपानेले पनि १९ कठ्ठामा लगाएको मुला नष्ट गरेका छन् ।
१७ विघाको तरकारी बारिमानै बारीमानै नष्ट हुने अवस्थामा